Mepee Uram Iche Edom Edib Esemokwu | Rayson
mepee akwa nchekwa mmiri
Rayson ejirila ebumnuche nke ịbụ ọkachamara na nke ọma. Anyị nwere ndị otu R & D siri ike nke na-akwado mmepe na-aga n'ihu nke ngwaahịa ọhụrụ, dị ka mataram maded na-emeghe. Anyị na-anụ ezigbo nlebara anya na ọrụ ndị ahịa ya, anyị ewepụtala ụlọ ọrụ. Ndị ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ n'etiti na-anabata arịrịọ ndị ahịa na-anabata arịrịọ ndị ahịa ma nwee ike soro ọnọdụ ịtụ ya n'oge ọ bụla. Ebighị eto na-ebi ndụ anyị bụ inye ndị ahịa nwere ngwaahịa dị oke ọnụ na ngwaahịa dị elu, na iji mepụta ụkpụrụ maka ndị ahịa. Ọ ga-amasị anyị iso ndị ahịa na ụwa niile na-arụkọ ọrụ niile. Kpọtụrụ anyị ka anyị nweta nkọwa ndị ọzọ.
Na-emeghe ahịrị ebe nchekwa na-emeghe na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ndị na-eweta ndị na-emepụta ihe, zụlite, na nwalee ihe niile dị arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ebe nchekwa mmiri na-emeghe mmiri, kpọọ anyị ozugbo.
Ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson mmiri na-agbasa ike na arụmọrụ ọrụ dị elu. Ọzọkwa, anyị ebilitela nke ọma RENT R & D siri ike R & D siri ike, nke na-eme ka anyị nwee ike ịmalite ngwaahịa ọhụrụ dịka manye na-eme ka a na-eme ihe na-eme emeghe. Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ndị ahịa na-enye afọ ojuju dịka ọkachamara na ngwa ahịa ahịa. Anyị na-anabata ajụjụ gị na nleta ala.
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa Best 10Inch White Memory ụfụfụ matarasị Supplier Ngwaahịa a na-egbochi nje. Ihe ya nke nwere ihe na-eme ka mmiri gwọọ mmiri nwere ike nyere aka gbochie uto nke ụmụ nje na - eme n'ụkwụ. Rayson Global Co., Ltd bụ njikọta njikọta nke Sino-US, hibere na 2007 nke dị na Shishan Town, Foshan High-Tech Mpaghara, ọ dịkwa nso na ụlọ ọrụ ama ama dịka V Ruo ugbu a, Rayson gafere asambodo sistemu njikwa njikwa mba ụwa. All ngwaahịa gụnyere ọhụrụ anyị ngwaahịa na-ọnọ na otutu imewe, na-ekwe nkwa àgwà, na asọmpi ahịa. Mgbe afọ nke mmepe, anyị guzosie ike ogologo oge nkwado mmekọrịta anyị na ndị ahịa n'ụwa nile. Biko nwee obi ike na anyị nwere ikike ịbupụ ngwaahịa anyị na ọ nweghị mmebi mejupụtara na ngwaahịa a napụtara. Anyị ji obi anyị na-anabata gị ase ma na-akpọ. Site na usoro mmepụta na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, Rayson nwere ike ịkwado onwe ya, mepee, rụpụta ma nwalee ngwaahịa niile n'ụzọ dị mma. N'ime usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-ahụ maka usoro ọ bụla iji hụ na ngwaahịa dị mma. Ọzọkwa, nnyefe anyị na-abịa n'oge ma nwee ike izute mkpa nke ndị ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na e zigara ndị ahịa ngwaahịa ahụ nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ịmatakwu banyere ， kpọọ anyị ozugbo. Ebe ọ bụ na e guzobere ya, Rayson chọrọ iji nye ndị ahịa anyị ihe ngwọta dị egwu ma dịkwa egwu. Anyị ehiwela nke anyị R& D etiti maka imepụta ngwaahịa na mmepe ngwaahịa. Anyị na-agbaso usoro njikwa njikwa ọkọlọtọ iji hụ na ngwaahịa anyị na-ezute ma ọ bụ gafere atụmanya ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ ndị na-ere ahịa mgbe achara ahịa maka ụwa niile. Ndị ahịa chọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, kpọtụrụ anyị. Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? LC na anya / site na TT, 30% Deposi na 70% nguzogide megidere akwụkwọ nke mbupu akwụkwọ witinin 7 ụbọchị ọrụ. 1. Tinye katoonu n’elu ụlọ dị larịị n’ime ime ụlọ ihi ụra gị, jiri nwayọ wepụ ihe matarasị tinye ma dina n’elu ihe ndina gị. 2.Na akpachapụ anya bepụ akwa dị na mpempe na-eme ka ị ghara ibelata akwa ọjọọ n'ime ya ma ọ bụ matrasị ahụ, etinyela mma. 3.Rụgharịa ihe nkpuchi a na-ekpuchi ekpuchi na akwa gị 4. Jiri nlezianya belata akpa rọba tinyere nche ka akwa ahụ na-amalite ịmalite ngwa ngwa, Wepu akpa rọba. 5.Ekwe ka awa 24 ọhụrụ gi matarasị n'ụzọ zuru ezu expand.May m gaa gị factory? Ee, ịnabata ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị nọ nso ọdụ ụgbọ elu mba Guangzhou Baiyun, ọ na-ewe naanị otu awa n'ụgbọ ala, anyị nwekwara ike ịhazi ụgbọ ala iji bulie gị.